China Steel umkhusane eludongeni mveliso kunye nabenzi Honghua
Udonga lwekhethini yentsimbi yesakhiwo esiphakamileyo
Udonga lwekhethini yentsimbi yesakhiwo esiphakamileyo Isakhiwo saseMarina Bay Sands sinezakhiwo eziphambili ezinemigangatho engama-55 ezinegadi enkulu ejingayo eluphahleni, ethathe iminyaka emine ukuyigqiba.
Isakhiwo seMarina Bay Sands senziwe ngezakhiwo eziphambili ezinemigangatho engama-55 ezinegadi enkulu ejingayo eluphahleni, nothathe iminyaka emine ukuyigqiba.
Inkqubo yodonga lwekhethini lutyalo-mali olukhulu kulwakhiwo nakwimpumelelo yexesha elide yesakhiwo. Inkqubo yodonga lwekhethini ayisiyiyo nje isithintelo kwimvulophu yangaphandle yokwakha, ibalulekile emfanekisweni nakwimbono yesakhiwo. Inkqubo elungileyo yoyilo lodonga kunye nokusebenza ngokugqwesileyo kubalulekile; Ngaphandle koko iya kubangela inkcitho enkulu kulondolozo lwexesha elizayo.
Egqithileyo Udonga lwekhethini yentsimbi kwisikhululo sikaloliwe ongaphantsi
Okulandelayo: Udonga lwekhethini lensimbi eludongeni lwangaphandle lwethala leencwadi